Bineensi Eegatan Nama Hin Nyaatu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBineensi Eegatan Nama Hin Nyaatu!
Damee Boruu: Caamsa 1, 2018
May 1, 2018: Protest intensified across East and West Gujii zones for 2nd day. Roads into and out of the zones are all closed.
Qabsoo billisummaaf yaroo gochaa jirru kana haala qabatamaa xinxallee hundee qabu irra dhaabbannee of eegannaa guddaan tarkaanfannee malee diinni keenya duraa kan taate TPLF karaa maraan kiyyoo nuuf hidhaa jirti. Shira diinaa fuula duraan nutti dhufaa jiru hubachuun rakkisaa miti. Isa gantuu fi gaaduun fira fakkaattee ijoollee keenya fixaa jirtu hubachuun salphaa miti. Gocha waraanni Agaazii ilmaan Oromoo tumu, hidhu, ajjeesu, qee’ee isaa irraa buqqisuu fi jumulaan lafaa irraa dugugee fixxaa jiru namni hin dammaqne nutti jennu iyyuu ni hubata. Haalli kun haalan suukaneesa tahu illee murannoo guutuun uummatni keenya dura dhaabbatee wareegama qaalii baasaa jira.
Oromoo Oromoon cabsuun warra Habashaaf tooftaa haaraa miti. Uuummatni keenya harqoota garbummaa jala itti akka kufu godhuu irraa kaasee bara baraan tooftaan lubbuu itti dheerefatan keessa sadarkaa ol aanaa qaba. Har’as haala baayyee nama gadisiisuun gantuu fi gaaduun fira fakkaatee ilmaan Oromoo kumaatamaan fixaa jirtu horachuu irra dabartee eenyummaa keenya qabsoo hadhawwan argame dhabamsiisuuf nutti agaamattee jirti. Shira summii damma irra dibanii qoonqoo uummata keenyaatti gad dhiibaa jiran saaxila baasuu fi qbasoo hadhooftuu irratti gochuudhaan harkaa fashasiisuun dirqama sababoontota Oromoo taha. Irra deebinee deddeebinee OPDO akka meeshaa dhuunfatti kan bixxilatee ittiin deemu TPLF akka tahe dagachuu hin qabnu waliif ibsaa jirra. Kana jechuun OPDO keessa namootni saboonummaa qabanii fi mirga saba isaanii dhaabbatan hin jiran jechuu meti. Akka ijaarsaatti OPDOn meeshaa diina fayyadu malee abdan kan uummata Oromoof dhaabbtuu fi dhaadatu miti. Keessattuu hoogantoonni OPDO ergamtoota TPLF akka tahan mamii qabaachuu hin qabnu.
Maxxansaa koo yaroo darbee “ Afuuffiin Madaa Hin Fayyisu” jedhuu irratti jumulaan dhumaatiin ilmaan Oromoo prezedantii Lammaa Magarsaa jalaatti irra gahe walitti qabaa walii gala prezedantoota Oromoo jalatti akka hin geenye ibsuuf yaaleen jira. Tibana diinni dubaan uummata keenya rasaasan haleelaa karaa fuula duraan ilmaan isaan summii isa wagaa jiru. Afaan uummata dubbatanii uummata nyaachuu fi nyaachisuu caaala diinummaan hin jiru. Qabsoon Fincila Didaa Garbummaa kan jabaatee deemaa ture Oromiyaa keessatti akka tahe wal nama hin gaafachiisu. Qabsoo kana qabaneessanii of ijaaruuf waan yaroon baraachiseef Labsiin Yaroo Muddamaa inni duraa dhiiba OPDOn labsame.
Kan sadarkaa duraatti akkeekatamee ture Qeerroo Bilisummaa Oromoo akka tahe shakkiin hin jiru. Baatiin jaha keessatti waan milkaa’uu dadhabaniif baatii sadii akka itti dabalatan ni yaadatama. Garuu waan OPDOn hubate tokko Qeerroo Bilisummaa dhabamsiisuun akka hin danda’amne dha. Kanaafuu ofumaa iyyuu qeerroo bilisummaa Oromoo of fakkeessuun Qeerroo bilisummaa Oromoo keessa harka galfachuuf yaallii guddaa goote. Foolee fi Abbaa Gadaa sobaa kabeebsuun uummataa Oromoo burjaajessuu tooftaa isa duraa godhattee as baate.
“ Yaroo roobaa dugdati na baattee, yaroo fixxeensaa garaa jalatti na baatee, yaa aayyoo jaalalli kee eessaa jiraa?”, jette mucaan jaldeessa. Obbo Lammaa Magarsaa Labsii yaroo muddamaa uummata Oromoo irratti labsee ilmaan Oromoo kumaatamaan ajjeessaa fi hidhaa “uummata Oromoo utuu qabnuu maal sodaanna”, “utuu Uummatni Oromoo dhakaa natti darbatee iyyuu an garuuma uummata kootiin baqadha” , jechaa ficcisiisuun cubbuu guddaa dha. TPLF akka isaan sobanii fi uummata dognogrsaniif isaan leenjiftee guddifatte gad dhiifte. Kunoo har’a kan facaafte haamachaa jirti. Yaroo ilmaan Oromoo wal harkaa butanii saba isaanii burjaajjeessaa jiran teessee nutti kofalti.
“ Bineensi Eegatan Nama Hin Nyaatuu”, jedhan. Dr. Abiyi durumaa kaafne waan arganneef nu gaaga’uuf ayyaana hin argatu. Warra Uummata Oromoo irratti hammenya hojjete hundaa faarsaa, mataa itti baachaa fi badhaasa kennaaf jira. Eenyummaa keenya dhiga kumaatamaan mirkanneefachaa jirru nu irraa xiqqeessuu yaada. Eenyummaa keenya humnan arganna malee eenyu iyyuu akka nuuf kennu orma irraa gaafachaa hin jirru. Hiree keenya qabsoo keenyaan murteefanna. Dr. Abiyi Habashoota biratti jaalatmuu fi faarsamuuf jedhee yaadni uummata Oromoo xiqqeessuuf dhidhitachaa jiru akka deebi’ee isa ciniinu dhagachuu hin qabu ture. Suusiin Impaayeera Itoophiyaa Dr. Abiyi fi Obbo Lammaa rakkisaa jiru karaa keenya waan hin dabarreef itti hin rakkannu.
Foolee ijaaruun qabsoo fi sochii Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbachisuu fi gufachiisu hin dandeenye. Qeerroon Bilisummaa Oromoo kun baduun isaa hafee qaama ijaarsa OPDO keessaa akka qinqanii seenee nu nyaachaa jiraa yaadoo qabu. Obbo Lammaan yaroo Uummata Oromoo itti gad bahee an isiin wajjin jirra jedhu akka miseensonni OPDO saboonnummaa qaban fi yaada Qeerroo Bilisummaa Oromoo fudhatanii jiran of saaxilaniif malee jaalala Oromoof qabuu agarsiisu hin ture. Wal gahii EPRDF torbaan dheeraaf godhaa turan keessatti uummata goowwomsuu fi burjaajessuuf drama isaan gochaa turan yoo dhiifne duubaan shira xaxxaa turuu isaanii hubanna. Duris tahe bara kana wal jiddutti rakkina tokko hin qaban.Waan hiikaatanis hin jiru. Rakkinni isaan qaban uummata wajjin dha.
Rakkina uummata wajjin qaban domsuuf ammas dhiiba OPDOn Labsiin Yaroo Muddamaa Lamaffaa labsame. Inni kuun akeekni isaa duraa miseensota OPDO warra tahan of keessaa qulqulleessuu dha. Kan hidhatti guramaa jiru, daballoota, kabinoota, polisoota Oromiyaa fi kantiibota magaalan Oromiya warra miseensota OPDO tahni. Ummata Oromoo lafa irraa duguguuf fi dhalaataa Oromoo fixxuun hundee kaayyoo TPLF waan taheef amma TPLF jirtu yoom iyyuu itti fufa.
Dhugaa dhuksuu caalaa cubbuun uummata irratti hojjetamu hin jiru. Akka Obbo Lammaan imimaan sobaa bo’u kan agrsiisu guyyaa (2/10/18) waraanni Agaazii uummat Oromoo Moyyaaletti guyyaa waaree lafa irraa haxa’u Obbo Tayee Danda’aa mootummaan uummata kana beekaa ajjeesse jedhee waan dhugaa dubateef mana hidhatti darbate. Inni lamaffaa warra Abbaa Gadaa dhumaatii Uummata Oromoo Irreecha Haroo Arsedee (10/02/16) tahe irratti “maloo namni qawween du’e hin jiru jedhaa UN commissioner itti nu himaa” jedhanii kadhatan. Warri afuuftuu fi bitamtuun garaa ishee qofaaf biyya lafaa kana irra jiraatu seenaa fi aadaa saba ishee beekuun dursuu qaba . Uummatni Oromoo kan ofti boonu Sirni Gadaa akkas ishee qaanesu waan qabuuf. Abbaan Gadaa dhugaa hin dhoksu, seera hin dabsu. Yaa abbaa gadaa bara baraan jiraadhaa. Waalluu ulfinaa ufadhaa . Seenaan Oromoota qabsoo kana irratti wareegamee fi dararamee bara baraan isin yaadataa hafa.
Fakkeessuun Eessaanuu Nama Hin Geessu! Damee Boruu: May 14, 2018 Jalqabaa kaaftee sababni TPLF OPDO…